Potatoes News အာလူးအကြောင်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှအာလူးသတင်းများရရှိနိုင်သည့်ဘာသာစကားအားလုံးတွင်
Colorado’s San Luis Valley produces more fresh potatoes than anywhere in the country outside of Idaho, and farmers there are ...
The transition from old crop to new crop potatoes is taking place right now, and two potato industry observers report ...
The four-year research program called TuberSense has been awarded by UK Research and Innovation (UKRI) nearly GBP675,000. The project aims ...
Modern Plant-Based Foods Inc. , ဆုရအပင်အခြေစိုက်အစားအစာကုမ္ပဏီ, သည်၎င်း၏စက်ရုံမှအခြေခံအဆာပြေများစာရင်းကိုကြေငြာရန် ၀ မ်းသာသည်။
စက်တင်ဘာလတတိယပတ်အထိအာလူးအများစုသည်ရိတ်သိမ်းနိုင်စွမ်းအပြည့်အ ၀ မမြင်ရတော့သောကြောင့်ကနေဒါ ...
ဗြိတိသျှအာလူးကုန်သွယ်ရေးအသင်း (BPTA) သည်၎င်း၏အသင်း ၀ င်များထံတင်သွင်းသောကုန်ကြမ်းများအသုံးပြုမှုအလားအလာအားသတိပေးရန် ...
ရေရှည်တည်တံ့သောမွေးမြူရေးအတွက်သော့ချက်နည်းပညာအဖြစ်အပင်မွေးမြူခြင်းသည်၎င်း၏“ ၂၀၃၀ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောရည်မှန်းချက်” တွင်အပင်မွေးမြူခြင်းဖြစ်သည်။
အပူဒဏ်နှင့်ခြောက်သွေ့မှုသည်ယခုနှစ်နွေရာသီ၏အိုင်ဒါဟိုတောင်ပိုင်းတွင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ စံချိန်တင်အပူရှိန်ကြောင့်ကောက်ပဲသီးနှံများ ...
ပြည်ပမှတင်သွင်းသောအရည်အသွေးကောင်းမျိုးစေ့များအကျပ်အတည်းကြောင့်အဆင့်မြင့်ပြုပြင်ပြီး ၀ ယ်လိုအားကိုဖြည့်ဆည်းရန်မဖြစ်နိုင်ပေ။
1 ၏စာမျက်နှာ 261 12... 261 နောက်တစ်ခု